Iswiidhan oo canbaareysey falalka aragixisanimo ee ka dhacey Belgium - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Raysal wasaare Stefan Löfven .Sawirkii : Jessica Gow/TT.
Iswiidhan oo canbaareysey falalka aragixisanimo ee ka dhacey Belgium
La daabacay tisdag 22 mars 2016 kl 14.03
Madaxda sare ee dalkaan Iswiidhan oo uu ugu horeeyo raysal wasaare Stefan Löfven ayaa canbaareeyey falalka argagixisnimo ee ka dhacey dalka Biljim.
Qaraxyadii saaka ka dhacey magaalada Barugsel ee caasimadda dalka Baljimka ayaa la qeexey illaa hadda iney ku geeriyoodeen – 34 ruux, halka illa hadda la xaqiijiyey iney ku dhaawacmeen tiro 200 kor u dhaafaysa.
Qaraxii ka dhacay garoonka dayuurradaha ayuu ka dambeeyay shakhsi is miidaamiyey, sida ay sheegtay idaacadda bulshada ee dalka Beljimka VTR - Ciidanka ammaanka e dalka Sweden ayaa kor u qaaday ammaanka garoommada dayuurradaha ee Bromma iyo Arlanda oo dhaca magaalada Stockholm.
Stefan Löfven (S), madaxa dawladda Sweden:
- Magaalada Baarugsel waxaa ka dhacay falal argagixis-nimo, xitaa haddii aan illaa hadda la ogsooneyn khasaaraha ka dhashay ayaa dhanka kale lagu soo warraneyaa iney dad ku geeriyoodeen, qaar kalena ku dhaawacmeen. Waa weerar lagu soo qaadey nidaamka dimoqoraadiyadda Yurub. Mana ahan mid aannu aqbali doonno in weerar lagu soo qaado nidaamka bulshada furfuran.
Dawladda Sweden ayaa si joogto ah ula socota xaaladdu hadba halka ay mareeyso iyo sida ay u saameeyso haddii ey jiraan muwaadiniin iswiidhish ah ee carrigaa ku sugan iyo saameeynta ay ku yeelato ama ku yeelan karto.
Anders Ygeman, (S), wasiirka arrimmaha gudaha:
- Mar kale ayaa dib loo soo weerayey xoriyadda iyo furfurnaanta Yurub. Marna naga suurtagelimeyso inaannu ka seexanno ka hor-tagga argagixisada.
Anna Kinberg Batra (M), hoggaamiyaha xisbiga M:
- Dhacdo waxash-nimo ayaa la soo gudboonaatay magaalada Barugsel, bulshada ku dhaqan iyo nidaamka furfuran ee Yurub. Argagixisada waa in dagaal joogto oo aan hakad gelin lagala hor-tago.
Jonas Sjöstedt, hoggaamiyaga xisbiga (V):
- Fal-argagixis-nimo ee laga naxo ayaa ka dhacay Barugsel. Waxaan u tacsiyeeynayaa dhammaan dadyoowgii ku wax-yeeeloobey. Argagixisada waa in loolga hor-tagaa hakad la’aan iyo dimoqoraadiyad.
Utrikesminister Margot Wallström (S), wasiirka arrimmaha dibadda:
- Kama ogolaan karno bulhsdayada furfuran argagixis-nimo.
Fredrick Federley, oo baaarlamanka EU u metela xisbiga © ayaa ku sugan xarunta baarlamanka ee magaalada Baarugsel.
- Waa dharbaaxo lagu dhuftay bulshada furfuran. Garoonka waxaa ku sugnaa bulsho caadi ah ee u ambabaxeeysay sidii ay ugu ciidi lahayd xafladda Påsk. Qaraxyadii ka dhacey garoonka dabadeed ayey goobtaa u gurmanaayeen gawaari badan ee gurmadka degdegga, kadib wuxuu qarax ka dhacay xarunta tareemmada ee Maalbeek, sida uu sheegay mar uu u warramayay idaacadda wararka Sweden ee TT.